OMBY HALATRA : Saron’ny zandary tao Ambohimanga Rova ilay tambajotra goavana
Ny alin’ny 10 hifoha 11 mey 2019 lasa iny, tambajotra mpanodinkodina omby halatra no saron’ny Zandarimariam-pirenena Ambohimanga Rova raha ny tatitra voarainay teo am-panoratana ny lahatsoratra, omaly. 12 juillet 2019
Araka ny zava-nisy tamin’izay fotoana izay dia halatra omby miisa no 3 niseho tao amin’ny fokontany Ambohidahy, kaominina Ambohimanga Rova, distrikan’Antananarivo Avaradrano. Tokony ho tamin’ ny 08 ora sy sasany alina tany ho any, nisy andian-jiolahy tsy nampiasa basy mahery vaika, saingy nitora-bato mba hoentina hampitahorana ny tompon’omby nandritra ny fanafihana. Ora telo taorian’ izay vao naheno ny mpitandro filaminana ka nirotsaka an-tsehatra nanampy ny fokonolona.
Rehefa nantsoina ny tompon’omby nanara-dia dia tsy nandray telefaonina. Roa andro taorian’ny halatra dia tafaverina ny roa tamin’ ireo omby ireo, izay marihina fa ny tompon’omby ihany no naka ny omby tany amin’ny mpangalatra. Nandeha ny famotorana lalina momba ny zava-niseho ary fantatra taty aoriana fa mpinamana ilay tompon’omby sy ireo mpangalatra. Vokatry ny valifaty noho ny tsy fahavitan’ity tompon’omby ity ny vola vidin’omby novidiny teo aloha tamin’ ireo mpangalatra no nahatonga ny fanafihana.
Nandritra ny fitohizan’ny fanadihadiana hatrany koa no nahitana fa omby tsy mazava avy any amin’ny faritra maro any avaratra any ireo omby namidin’ ny mpanafika tamin’ny tompon’omby ka fantatr’ ity farany tsara izany. Ilay tompon’omby indray avy eo no voalaza fa mitady lalam-barotra hivarotana ny hena. Rehefa lafo ny hena izay vao aloa ny vidin’omby. Voaporofo noho izany fa efa tambajotra lehibe ireto farany, izay misy ny mpandroaka ny omby halatra, ny mpividy, ary ny mpivaro-kena no tratra, ny tompon’omby kosa no ivo mampihodina io asa ratsy io. Vokany, voasambotra ireo olona miisa dimy miaraka amin’ny tompon’omby, ny roa hafa kosa mbola karohina fatratra. Hiakatra fampanoavana anio zoma 12 jolay 2019 moa ny raharaha.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (168) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (83) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020